Sistem Na-ekpo Ekpu Snowmelt China Manufacturer
Nkọwa:Sistem kpo oku,Egwuregwu Ndị Na-ekpochapu Ulo,Snowmelt Rooftop Ịkụ ọkpọ
Home > Ngwaahịa > Mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na windo systerm > Mmiri na-ekpo ọkụ nke snow na PipeGuard > Sistem Na-ekpo Ekpu Snowmelt
Ezubere iji gbochie elu n'elu ụlọ nke nwere ike imebi, Igwe ọkụ ọkụ na-agbaze ọkụ bụ ngwọta dị mfe nke na-egbochi ụlọ oyi kpọnwụrụ, nke gbawara agbawa ma mebie emebi. Ozugbo arụnyere, snow na-agbaze kpo oku na-akpacha aka na-eme ka okpomọkụ dị n'elu ụlọ mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-adaba na-na-emetụtakwa, ma na-agbanwe okpomọkụ iji zọpụta ike ozugbo ụlọ ahụ rutere na nchekwa dị jụụ.
Igwe ihe ọkụkụ anyị na-ekpo ọkụ na-agụnye nkà na ụzụ ọhụrụ anyị nke kpo oku-PTC nke kpo oku kpo oku.
Kedu ihe bụ PTC?
PTC pụtara nchịkwa onwe onye. Ọ dịghị mkpa maka usoro ịchịkwa okpomọkụ. Ọ bụ ụzọ dị mfe nke kpo oku nke na-adịghị mkpa maka okpomọkụ. Ọ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo oku nke na-achịkwa onwe ya na ikpo ọkụ dị n'ofe dum.
Snow na-agbaze ikpo okwu ọkụ maka tubing Kpọtụrụ ugbu a
Sistem kpo oku Egwuregwu Ndị Na-ekpochapu Ulo Snowmelt Rooftop Ịkụ ọkpọ Systerm na-ekpo ọkụ Sistem na-ekpo ọkụ Snowway Sauna ji ihe ndi na-ekpo oku System Defogger Mirror Terrarium kpoo akwa